အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဟောင်းရှော...? (ကိုယ်တိုင်မေး ကိုယ်တိုင်ဖြေ)
သူကိုယ့်ကို ချစ်တာ သေချာသလား? ကိုယ်သူ့ကိုချစ်တာ သေချာသလား? ဒီနေ့ နေသာမှာသေချာသလား? မိုးရွာမှာသေချာသလား? မြန်မာ အသင်း ဘောလုံးပွဲမှာ နိုင်မှာသေချာသလား? ဒေါ်လာဈေး တက်မှာ သေချာသလား? ပျော်ရမှာသေချာသလား? ငိုရမှာသေချာသလား?
ဘဝမှာ သေချာမှု က ပိုများသလား၊ မသေချာမှု က ပိုများသလား? မသေချာဘူးဆိုတာကရော သေချာရဲ့လား? သေချာပါတယ်ဆိုတာကရော သေချာရဲ့လား?
ငရဲကြီးမှာ သေချာသလား? နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကော သေချာရဲ့လား? ငရဲရှိတာကော သေချာသလား? နိဗ္ဗာန်ရှိတာကော သေချာသလား?
အကြွေးပေးမှာ သေချာသလား? အကြွေးပြန်ရမှာကော သေချာသလား?
မကုရင် သေမှာသေချာသလား? ကုရင်ကော ပျောက်မှာသေချာသလား?
တကယ်ချစ်တာသေချာသလား? ယူဖြစ်မှာ သေချာသလား? အိမ်ပါတာသေချာသလား? ကားပါတာသေချာသလား? အကုန်ပါတယ်ဆိုရင်ကော သေချာသလား?
အလုပ်ရမှာ သေချာလား? လစာများတာသေချာသလား? လူထုအတွက် လုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကကော သေချာရဲ့လား? တကယ်သေချာရဲ့လား?
“ယူ”ထားသလောက် ပြန်မ“အန်”လို့ “ယူအန်”လို့ ခေါ်တာသေချာသလား? ယူနိုက်တက် နတ်သင်းမို့လို့ ယူအန်လို့ခေါ်တာသေချာသလား?
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောသေချာသလား? သူ့အတွက်ကကော သေချာသလား? အခြေအနေကကော သေချာရဲ့လား?
ယူလိုက်ရင် ပိုသေချာမလား? မယူဖြစ်ရင်ကော (ချစ်တာ...)သေချာလား? စာချုပ်ကကော သေချာရဲ့လား? စိတ်က ပိုသေချာသလား? စိတ်မပါဘဲ စာချုပ်ကြီးပဲဆိုရင်ကော သေချာလား?
အိမ်ထောင်ပြုတာ သေချာသလား? အပျို လူပျို လုပ်တာ ပိုသေချာသလား? အနာဂတ်အတွက်သေချာတာလား? ပစ္စုပ္ဗန် အတွက်သေချာတာလား? အတိတ်ကကော သေချာခဲ့ရဲ့လား?
ညောင်စေ့လောက်လှုရင် ညောင်ပင်လောက်ရမှာ သေချာလား? စိတ်ထားတတ်ရင်ကော သေချာမှာလား? ကောင်းတာလုပ်ရင်ကော ကောင်းတာ ပြန်ဖြစ်မှာ သေချာမှာလား? ခုဘဝမှာ သေချာမှာလား? နောက်ဘဝကျမှသေချာမှာလား?
ကြောင်ဆိုတာကော သေချာလား? ကျားဆိုတာကော သေချာသလား? ကြောင်ကြောင် ကျားကျား ဖြစ်နေတာ က ပိုသေချာသလား?
ကလေးယူမှာ သေချာသလား? ကလေး ရမှာသေချာသလား? ယောက်ျားလေးဆိုတာ သေချာသလား? မိန်းကလေး ဆိုတာသေချာသလား?
ယောက်ျား ကိုယ်ခန္ဓာ ရှိပေမယ့် ယောက်ျားစိတ် ရှိတာသေချာလား? ယောက်ျားဆိုရင် ပိုမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာသေချာသလား? မိန်းမ ဆိုရင် ပိုအူတိုတယ်ဆိုတာသေချာသလား?
ထိုင်ခုံနဲ့ ထိုင်မှာသေချာသလား? ထိုင်ခုံရှိရင် ကော ပိုသေချာသလား?ထိုင်ခုံမလှုပ်မှာကော သေချာသလား? ထိုင်ခုံမှာ ကြာကြာ ထိုင်ရမှာကော သေချာရဲ့လား? ထိုင်ခုံပိုင်ရင် ကော ထိုင်ရမှာ သေချာသလား? ထိုင်ခုံ ကိုအမွေ ရထားရင်ကော ထိုင်ရမှာသေချာသလား? ထိုင်သင့်တာသေချာသလား? ထိုင်ခွင့်ရှိတာ သေချာရဲ့လား? ထိုင်ထိုက်တာသေချာသလား?
စာရေးနေတာ သေချာသလား? အကျိုးပြုမှာသေချာသလား? အပျင်းပြေမှာသေချာသလား? သုတ ပါမှာ သေချာသလား? ရသပေးမှာသေချာသလား? ဒါမှမဟုတ် ဟာသ နဲ့ပျော်ရွှင်စေမှာသေချာသလား?
တကယ်ဘတ်တာသေချာသလား? သေချာဘတ်တာသေချာသလား? တကယ်ခင်လို့ လာတာ သေချာသလား? ပြန်လာလည်စေချင်လို့ လာတာ က ပိုသေချာသလား? ပြန်လိုက်မလည်ရင်ကော နောက်ထပ်လာမှာသေချာသလား?
ခင်ဖို့ကောင်းတာသေချာသလား? ဟင်းချက်တတ်တာကော သေချာရဲ့လား? လျောက်ရေးနေတာ သေချာလား? စေတနာ ထားတာသေချာသလား?
ရည်းစားများတာသေချာသလား? ကံဆိုးတာ သေချာသလား? ချစ်တတ်တာကော သေချာရဲ့လား?
တနေရာရာမှာ တခုခုကတော့ သေချာမှာပါ
အနည်းဆုံး ဘာမှမသေချာဘူးဆိုရင်တောင်မှ အဲ့ဒီ မသေချာဘူးဆိုတာကြီးကတော့ သေချာနေအုံးမှာပဲလေနော်
နောက်တခု သေချာတာ ရှိသေးတယ်
ဘတ်တဲ့ လူ အဲ့လောက် မရှိဘူးထင်လို့ ပျင်းပြီး ပစ်ထားမိတယ်
စထားရင် ဆုံးရမယ် မှလား
Posted by တီချမ်း at 11:20 AM